Waxaad ku amartaa waxyaalahaaga Rabbiga, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Shuqulladaada Rabbiga ku amar,
Beeralle ayaa baabuurkiisii ​​la jiifiyey ku rakibay wadada weyn wuxuuna arkay in kulaylku siddo shandad culus. Wuu istaagay oo wuxuu usiiyay fuushan uu weheliyuhu ku farxay inuu qaato. Markuu inbadan socday, ninka beerta leh, ee fiirinaya muraayadda gadaalka, wuxuu arkay in shilku ku dhuftay aagga xamuulka, boorsada culus ee wali garbihiisa ka laalaada. Ninkii beerta lahaa ayaa istaagay oo qayliyey, "Hey, maxaad u qaadan weyday boorsadaada oo aad sariir ku seexan doontaa?" "Taasi waa hagaag," ayuu ku jawaabay qofkii wax garanayay. Khasab kuguma aha. Kaliya i gee meesha aan u socdaa waan faraxsanahay ».
Sidee doqonnimo ah taasi waa! Laakiin Masiixiyiin badan ayaa leh aragtidan. Waxay ku faraxsan yihiin in lagu qaado "ambalaas" ee geynaysa cirka, laakiin culayska kama saaridoonaan intii baabuur wadaan.
Tani waxay ka soo horjeeddaa runta aan ka helno Kitaabka Quduuska ah - runtiina culayskaaga ayaa kuu fududayn doona! Maahmaahyadii 16,3, Boqor Sulaymaan wuxuu ina tusiyaa mid ka mid ah quruxdiisa cajiibka ah mar labaad: "Shuqulladaada Rabbiga ku amar, Oo qorshahaaguna wuu liibaani doonaa." Aayaddan waxaa jira waxyaabo badan oo ka badan isku dayga in la noqdo Masiixi keli ah. “Taliska” halkan macno ahaan waxaa loola jeedaa “rogid (on) ». Waxay leedahay wax ay kuxirantahay waxa wax laga rogo ama ku duudduubto qof kale. Warbixin ku jirta Bilowgii 1 ayaa caddaynaysa. Yacquubna wuxuu yimid isniintii, wuxuuna ku socday xagga Fadan Araam, oo wuxuu ka helay Raaxeel; Iyada iyo kuwa kaleba waxay doonayeen inay waraabiyaan idihii, laakiin dhagax weyn ayaa daboolay furitaanka ceelka. Markaasaa Yacquub yimid oo dhagixii ka giringiriyey
Furitaanka isha (Aayadda 10) oo waraabin jirtay idaha. Erayga Cibraaniga ah "wallow" halkan waa isla erayga "amar" ee Maahmaahyadii 16,3. Muujinta ku duubista dareenka ah inuu culeys ku saaro Ilaah sidoo kale waxaa laga heli karaa Sabuurka 37,5: 55,23 iyo. Waxay ka dhigan tahay ku tiirsanaanta buuxda ee Ilaah .. Rasuul Butros wuxuu u qoray qaab la mid ah: «Daryeelkaaga oo dhan
tuur; maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay » (1 Butros 5,7). Ereyga Griigga ah ee "tuur" asal ahaan waxaa loola jeedaa isla erayga "(amar") ee Cibraaniga, oo sidoo kale macnaheedu yahay "rogitaan ama tuurin" (to) »waa la tarjumay. Tani waa ficil miyir leh dhinacayaga. Waxaan sidoo kale helnay ereyga "tuur" xisaabta gelitaanka Ciise ee Yeruusaalem, markuu fuushanaa dameer
- «oo dharkoodii ku tuureen walxahaas» (Luukos 19,35). Ku tuur wax walwal ah oo kaa welweliya xagga Rabbigeenna. Isaga ayaa daryeeli doona maxaa yeelay isagu adiga ayuu ku xannaanayn doonaa.
Miyaad cafiyi kartaa qof? Ku tuur ilaahoow! Ma xanaaqdaa? Ku tuur ilaahoow! Ma baqaysaa? Ku tuur tan Ilaah! Miyaad ka dheregtay cadaalad darrooyinka dunida ka jira? Ku tuur tan Ilaah! Ma waxaad la macaamilaysaa qof adag? Culayska saar Ilaah! Ma lagu xadgudbay? Ku tuur ilaahoow! Ma quustaa? Ku tuur ilaahoow! Laakiin taasi maahan. Martiqaadka Ilaah ee 'tuurida' wuxuu ku dabaqmayaa xannibaado la'aan. Sulaymaan wuxuu qoray in wax alla wixii aan samayno ay nagu dhici karaan Ilaah. Wax walba ku tuur Ilaah inta aad ku guda jirto safarka nolosha - qorshayaashaada, rajooyinkaaga, iyo riyooyinkiinna. Markaad wax walba Ilaah ku tuurayso, ha kaliya sameynin inaad maskax ahaato. Runtii samee. Ku fikir fikradaada ereyo. Eebbe la hadal. Si gaar ah u qeex: “Codsiyadaada Ilaah ha u ogeysiiyo” (Filiboy 4,6). U sheeg: "Waan ka walwalaa ..." "Waan kuu soo celinayaa. Adiga ayaa iska leh Ma aqaan waxaan sameeyo ”. Tukashadu waxay aasaastaa cilaaqaad oo Ilaahay aad iyo aad buu u jecel yahay inaan isaga u jeesanno. Wuxuu doonayaa inuu nolosha la wadaago. Wuxuu doonayaa inuu adiga naftaada ku ogaado! Ilaah wuxuu doonayaa inuu ku dhageysto - waa maxay fikir!
Ereyga “amarkii” mararka qaarkood waxaa loo tarjumay “aaminaad” Axdiga Hore. Kitaabka "Amplified Bible" wuxuu tarjumay Maahmaah 16,3 sida soo socota: "Shucuubtaada [ku tuur] ama u tuur] shuqulkaaga Rabbiga [ku amaro iyaga / isaga si buuxda u aamin isaga]" Wax kastoo ay tahayba, isaga u dhiib isaga. Isaga duub Kalsoonida Ilaah inuu ka yeelo arrinta oo yeelo wixii uu doono. Isaga isaga dhaaf oo isdeji. Maxaa dhici doona mustaqbalka? Ilaahay “wuu fulin doonaa qorshayaashaada”. Isaga ayaa qaabayn doona damacyadeena, waxaan dooneynno iyo qorshayaasheena si wax walba ay ugu jiraan isaga doonistiisa, oo wuxuu gelin doonaa himilooyinkeena qalbiyadeenna inay iyagu noqdaan (Sabuurradii 37,4).
Ka qaad culayska garbahaaga. Ilaah wuxuu nagu martiqaaday inaan wax walba dul saarno. Markaa waxaad yeelan kartaa kalsooni iyo nabad gudaha, qorshayaashaada, rabitaannadaada iyo waxyaabaha aad ka welwelsan tahay ayaa si uun lagu fulin doonaa maxaa yeelay waxay waafaqsan yihiin doonista Ilaah. Tani waa casuumaad ay tahay inaadan diidin!